Topim-bola 10 tsara indrindra amin'ny DeFi amin'ny alàlan'ny tsenambarotra am-bola Jona 2021 | DeFi Coins Vola DeFi 10 tsara indrindra - Deficoins.io
Famerenana Bitcoin nofonosina
Fanamarihana taona momba ny vola
Fandinihan-tena ho an'ny saina manokana
The Review momba ny sary
Review momba ny omby
Famerenana DAO Token Review
Vidio ny famantarana anay
Vola DeFi 10 tsara indrindra
Ny tsenan'ny famatsiam-bola itsinjaram-pahefana (DeFi) dia nahazo tombony bebe kokoa tamin'ireo mpankafy crypto tato anatin'ny taona vitsivitsy - nanintona ireo mpampiasa vola erak'izao tontolo izao. Amin'ny endriny tsotra indrindra, ny DeFi dia teny ampiasaina amin'ny fampiharana ara-bola natsangana tamin'ny teknolojia blockchain - izay mikendry ny hamongotra ny tontolo ara-toekarena amin'ny alàlan'ny fanoloana andrim-panjakana foibe.
Androany, ny sehatra DeFi dia afaka manome anao tolotra ara-bola feno - manomboka amin'ny varotra, mindrana, mampindrana, fifanakalozam-bola itsinjaram-pahefana, fitantanana fananana, sns.
Ny sehatra DeFi malaza indrindra dia namolavola ny mari-pamantarana azy ireo manokana, ho fitaovana hanamorana ny asany ary koa hanentanana ny mpampiasa. Raha liana amin'ny fahazoana sombin'ity tsena manavao ity ianao - ny fampiasam-bola amin'ny faribolana DeFi no iray amin'ny fomba tsara indrindra aleha.
Eto amin'ny DefiCoins.io - jerentsika ny sasany amin'ireo farantsakely DeFi tsara indrindra eny an-tsena ary hianarantsika ny andraikitr'izy ireo ao anatin'ny tontolo iainana DeFi. Izahay koa dia manazava ny fizotry ny fomba ahafahanao mividy vola madinika DeFi avy amin'ny fampiononana ao an-tranonao nefa tsy mandoa vola na iray isanjato amin'ny saram-barotra na komisiona.
Vidio ny vola vidiana DeFi miaraka amin'ny mpanera anay
10 Vola DeFi tsara indrindra 2021
Misaotra noho ny fitomboan'ny lazan'ny olona sy ny fisian'ny sehatra DeFi vaovao - ny lisitry ny vola madinika DeFi dia mitombo hatrany. Tamin'ny fotoana nanoratana - ny totalin'ny tsenan'ny indostria DeFi dia mitentina $ 115 miliara mahery. Goavana izany, indrindra rehefa mandinika ny fahatanoran'ny DeFi ianao.
Ity misy lisitr'ireo farantsakely DeFi 10 tsara indrindra izay nanampy tamin'ny fiakarana an'io tsenan-tsivily itsinjaram-pahefana io.
Uniswap dia fifanakalozana distrika itsinjaram-pahefana izay manjaka ankehitriny amin'ny tsenan'ny DeFi. Izy io dia mampiasa rafitra Automated Market Maker (AMM) hahazoana antoka fa ampy ny liquidity ho an'ny mari-pamantarana ERC20 mifanakalo amin'ny tranokalany. Ny protokol Uniswap dia nahasarika mpanaraka mahatoky araka ny vahaolana crypto-assets. Io dia ahafahanao mifehy tanteraka ny lakilanao manokana, mifangaro amin'ny poketra ivelany, ary mamela anao hivarotra amin'ny sarany ambany.
Ny token UNI dia natolotry ny protokol Uniswap tamin'ny volana septambra 2020 - ho toy ny fomba fanomezana valisoa ireo mpampiasa azy. Ny vola madinika DeFi dia niditra tao amin'ny tsena tamin'ny vidin'ny varotra $ 2.94. Nandritra ny volana vitsivitsy - ny sandan'ny vola madinika dia nisondrotra hatramin'ny $ 35.80. Ny farantsakely DeFi dia azo lazaina fa iray amin'ireo marika nahomby indrindra teo amin'ny sehatry ny indostria - miaraka amin'ny fiakarana mihoatra ny 1,100% ao anatin'ny valo volana monja.
Izy io koa dia iray amin'ireo farantsakely DeFi tsara indrindra amin'ny resaka tombana, miaraka amina tsena 18 tapitrisa miliara mahery. Rehefa mividy UNI ianao dia hahazo famporisihana sy fihenam-bidy amin'ny protokol Uniswap. Ohatra, miankina amin'ny haben'ny fananana UNI - hahafahanao mifidy ny politika samihafa natolotra ho an'ny ekisistia Uniswap.
Ny protokol Uniswap dia efa namorona drafitra efa-taona ho an'ny fizarana mari-pamantarana UNI. Avy amin'ny vola mitentina 1 miliara total, 60% natokana ho an'ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina Uniswap. Ny vola madinika DeFi dia efa azo amidy amin'ny sehatra cryptocurrency malaza toy ny Capital.com.
Mividiana Uniswap izao
Chainlink dia azo inoana fa ny tambajotra oracle itsinjaram-pahefana be mpampiasa indrindra hita amin'izao fotoana izao eo amin'ny tsenan'i DeFi. Mamelona ny angon-drakitra tena izy amin'ny fifanarahana marani-tsaina eo amin'ny blockchain - manompo amin'ny fifandraisan'ny fampahalalana mbola tsy nisy toa azy teo amin'ny crypto DApps. Ny mpamatsy dia namoaka ihany koa ny LINK famantarana azy manokana, izay manana fitaovam-piasana maromaro eo amin'ny lampihazo.
Noho ny fitomboan'ny lazan'ny sehatra itsinjaram-pahefana, Chainlink dia niaina fitomboana lehibe hatramin'ny nanombohany tamin'ny taona 2019. Nivoatra izy io tamin'ny fotoana iray ahafahany mamatsy vola ireo fandraisana andraikitra crypto hafa izay mety manan-danja amin'ny tontolo iainana Chainlink.
Raha ny resaka kapitalin'ny tsena, ny LINK dia iray amin'ireo vola madinika malaza DeFi amin'izao fotoana izao - miaraka amin'ny tombana maherin'ny 14 miliara dolara. Ny vola madinika DeFi dia niditra tamin'ny 2021 tamin'ny vidiny $ 12.15. Tamin'ny fotoana nanoratana, tamin'ny volana aprily 2021 - ny sandan'ny LINK dia nahatratra hatrany amin'ny $ 44.36 hatramin'ny avo indrindra. Betsaka ny manantena fa hitohy mandritra ny fotoana maharitra ity làlana fitetezana ity.
Nandritra ny taona maro dia nanaporofo i Chainlink fa iray amin'ireo sehatra DeFi tsara indrindra nitana ny maha-zava-dehibe azy ao amin'ny indostria. Satria toa manitatra ny fiasan'ny sehatra DeFi misy azy io, ny LINK dia afaka manome ny mpamorona DeFi hafa manana fahalalahana fanampiny. Raha dinihina ireo lafiny ireo, ny token LINK dia azo lazaina ho iray amin'ireo farantsakely DeFi tsara indrindra tokony hodinihina amin'ny 2021.
Vidio Chainlink izao
Ho an'ireo tsy mahalala, ny tsena ara-bola hafa amin'ny crypto sy ny vola faribolana DeFi dia mikorontana be. Ho an'ireo izay mitady hisorohana ny fiovan'ny vidin-javatra, dia mety hahaliana ny farak'i DAI. Raha fintinina, ity vola crypto DeFi crypto ity dia natsangana tamin'ny blockchain Ethereum ary manana ny sandany mifamatotra amin'ilay dolara amerikana.
Raha ny tena izy, ny DAI no fananana crypto voalohany notokanana, tohanan'ny antoka. Ity farantsana DeFi ity dia novolavolain'ny rindrambaiko open-source MakerDAO Protocol - izay iray amin'ireo sehatra DeFi tsara indrindra hampiasa fifanarahana marani-tsaina hananganana rindrambaiko itsinjaram-pahefana samihafa.
Amin'izao fotoana izao, ny DAI dia manana kapitalisma mitentina 4 miliara dolara - ka mahatonga azy io ho iray amin'ireo farantsa DeFi tsara indrindra mivezivezy. Izy io dia manana tahan'ny fifanakalozana izay mitovy amin'ny sandan'ny dolara amerikana raha oharina amin'ny vola hafa matanjaka. Araka ny azonao an-tsaina, ny tombony lehibe amin'ny fametahana DAI dia ny famerana ny mety hampidi-doza anao amin'ny fihenan'ny tsenan'ny cryptocurrency.
Ho fanampin'izany, ny fampiasana DAI fa tsy vola fiat dia afaka manampy anao koa hampihena ny vidin'ny fifanakalozana sy ny fahatarana tafiditra rehefa mifanakalo amin'ny tsena ara-bola. Farany, ny DAI dia vola madinika DeFi tsara indrindra amin'ny karazany - noho izany dia manantena zavatra lehibe ho an'ny tetikasa mandroso amin'ny taona ho avy izahay.
Vidio DAI izao
0x dia protokol DeFi iray izay mamela ny mpamorona hanangana ny fifanakalozana cryptocurrency itsinjaram-pahefana. Izy io koa dia toy ny vahaolana DEX tsy miankina amin'ny trano fivarotana izay ahafahan'ny mpampiasa mivarotra mora foana ny mari-pamantarana ERC20. Na izany aza, ny fahasamihafana manamarika dia miaraka amin'ny fanohananany ny mari-pamantarana ERC20, ny fifanakalozana 0x dia manamora ny fananana crypto ERC-721 ihany koa. Raha lazaina amin'ny teny hafa, io dia manome toerana ho an'ny varotra tsy misy alalana amin'ny karazana vola madinika nomerika.
Ao amin'ny 2017, ny protokol 0x open source dia nampiditra ny farantsakely 0x (ZRX). Toy ny vola madinika DeFi ambony maro hafa, ny vola ZRX dia mihazakazaka ihany koa ao amin'ny blockchain Ethereum ary namboarina tany am-boalohany mba hanampy amin'ny fitantanana ny tontolo iainana. Na izany aza, tamin'ny taona 2019 - ny vola 0x dia notendrena fitaovana bebe kokoa, toy ny fahaiza-manaon'ny mpamatsy vola.
0x dia nahavita be dia be hatramin'ny fiandohan'ny taona 2021. Raha ny tena izy, ny vola faribolana DeFi dia nitombo hatramin'ny 500% - hatramin'ny avo indrindra $ 2.33 tamin'ny volana aprily 2021. Ny token dia mitazona kapitalin'ny tsena 1.2 miliara mahery . Raha liana amin'ny fidirana amin'ny protokol 0x ianao, dia azonao atao ny mivarotra an'io DeFi io amin'ny sehatra fifanakalozana afovoany sy ny fanapariaham-pahefana - toy ny broker Capital.com voafetra.
Vidio 0x izao
Maker (MKR) dia vola hafa DeFi izay novolavolain'ny ekipa tao amin'ny protocol MakerDAO. Na dia natao hitondra fitoniana aza ny DAI, ny tanjon'ny vola madinika Maker dia ny aseho ho fampitaovana. Raha ny marina dia ampiasaina ny token MKR DeFi hitazomana ny sandan'ny DAI ho $ 1. Mba hahatratrarana an'io, ny coin Coin dia azo foronina ary horavana mba hampifandanja ny fiovan'ny vidiny hita eny amin'ny tsena midadasika.
Tompon'antoka amin'ny fanitsiana ny torolàlana momba ny DAI stablecoin no tompon'andraikitra amin'ny MKR. Raha te hampiasa vola amin'ny Maker ianao dia hahazo zon'ny mpifidy ao anatin'ny ekosistema MakerDAO.
Ankoatr'izay, ianao koa dia afaka mahazo insentif ho setrin'ny fandraisanao anjara amin'ny fitantanana ny protokol MakerDAO, toy ny fihenan'ny sarany sy ny zanabola zahana. Miaraka amin'ny tombam-bidy mihoatra ny 3 miliara dolara, Maker dia iray amin'ireo vola faratampony DeFi 10 ambony eo amin'ny tsenan'ny crypto. Raha te-hanao tsara eo amin'ny sehatry ny varotra cryptocurrency ny DAI, dia mety han taratra ny vidin'ny vola madinika De De Maker.
Vidio ny mpanamboatra izao
Ny Compound dia sehatra findramam-bola indram-bola indram-bahoaka mitarika amin'ny findramam-bola izay ahafahan'ny mpampiasa manangona zanabola amin'ny fananany crypto. Ny sehatra dia nanamboatra dobo fitobiana marobe ho an'ity tanjona ity. Raha vantany vao napetrakao amin'ny iray amin'ireo kamory toy izany ny fanananao, dia afaka mamorona cTokens ianao ho setrin'izany.
Rehefa te hanana fidirana amin'ny fanananao ianao dia azonao atao ny manavotra ireo cTokens ireo. Marihina fa satria mitombo ny sandan'ny cTokens rehefa mandeha ny fotoana dia afaka mahazo zanabola amin'ny fampiasam-bolanao koa ianao. Tamin'ny volana Jona 2020, nanangana ny marika nahaterahany - Comp. Ireo manana an'ity marika DeFi ity dia afaka mahazo ny zon'ny mpifidy ao amin'ny protokol Compound.
Nahazo vahana be eo amin'ny tsena ity sehatra ity, ary ny volan'ny DeFi farany dia nandany vola mitentina 3 miliara mahery. Ny Compound dia niditra tamin'ny 2021 tamin'ny vidiny $ 143.90. Nanomboka teo dia nihoatra ny $ 638 ny vola madinika Defi. Midika izany fa tao anatin'ny efa-bolana monja ny fifanakalozana - nitombo 350% ny sandan'ny compound.
Mividiana compound izao
Aave dia sehatra DeFi loharano misokatra izay miasa ho serivisy fampindramambola crypto. Ny protokolan'ny liquidity tsy miankina aminy dia ahafahanao mahazo zanabola ary mindrana amin'ny fanananao crypto. Ity sehatra DeFi ity dia nampidirina voalohany tamin'ny tsenan'ny cryptocurrency tamin'ny 2017.
Na izany aza, tamin'io fotoana io - ny sehatra dia nantsoina hoe ETHLend, miaraka amin'ny LEND ho toy ny famantarana azy. Izy io dia niasa voalohany indrindra ho toy ny rafitra fanaovana lalao hampifandraisana ireo mpampindram-bola sy mpampindram-bola. Tamin'ny taona 2018, nomena anarana hoe Aave ny sehatra DeFi - nanampy tamin'ny fampandehanan-trosa vaovao.
Androany, ny coin AAVE dia azo apetraka amin'ny alàlan'ny protokol mba handray anjara amin'ny fiarovana sy ny fahombiazany. Ankoatr'izay, afaka mankafy valisoa staking sy sarany misy fihenam-bidy amin'ny sehatra Aave ihany koa ianao. Ny vola madinika DeFi dia manana teboka fivarotana marobe - satria manana fitaovana enti-manerantany amin'ny tsenan'ny fampindram-bola crypto miha-feno olona.
Izy io koa dia iray amin'ireo vola faratampony DeFi eo amin'ny lafiny tombana, miaraka amina kapitalin'ny 5 miliara mahery. Ny vola AAVE DeFi dia nankafy tsena marobe hatramin'ny fiandohan'ny taona 2021 - nitombo 350% ny sandany tao anatin'ny efa-bolana.
Synthetix dia iray amin'ireo sehatra DeFi mitombo haingana indrindra amin'ny tsena ankehitriny. Izy io dia ao ambadiky ny fifanakalozam-pahefana voadidy solika izay mamela ny mpampiasa hifanakalo famantarana amin'ny sehatra. Na izany aza, ny mampiavaka an'i Synthetix dia ny famelana ny mpampiasa hanana ny fananany synthetic - antsoina hoe 'Synths.' Amin'ny teny tsotra, Synths dia fitaovana ara-bola manara-maso ny sandan'ny fananana ifotony.
Azonao atao ny mivarotra Synths amin'ny vola crypto, indices, ary fananana hafa manerantany toa ny volamena amin'ny fifanakalozana synthetix manana fifanakalozana. Na izany aza, mila manana SNX ianao - ny famantarana teratany an'ny Synthetix hanome fiantohana mifanohitra amin'ny Synths. Amin'ity fomba ity, isaky ny varotra Synths anao, ny tokenanao SNX dia hihidy ao anaty fifanarahana marani-tsaina.
Ho fanampin'izany, ny token SNX dia mizara fizarana sarany voaangona amin'ny tompony koa, ahafahanao mahazo vola miditra. Raha dinihina ity fampitaovana ara-dalàna ity ao anatin'ny lampihazo, dia mety hitombo hatrany ny fangatahana mari-pamantarana SNX. Ny token dia efa nipoitra ho toy ny iray amin'ireo farantsa DeFi tsara indrindra, miaraka amin'ny kapitalin'ny tsena 2 tapitrisa dolara mahery. Nandritra izay efa-bolana lasa izay dia efa nitombo 120% ny sandan'ny vola SNX.
Vidio izao ny Synthetix
Ny Yearn.finance dia natomboka tamin'ny fiandohan'ny taona 2020, miaraka amin'ny tanjona ny hanomezana vokatra be ho an'ny staking Ethereum, stablecoins, ary altcoin hafa. Ny protokolota dia mamela izany amin'ny alàlan'ny endri-javatra antsoina hoe 'Vaults', izay manampy amin'ny fanalefahana ny vidin'ny fifanakalozana Ethereum.
Yearn.finance dia manantena ny hanatsotra ny foto-kevitry ny DeFi ho an'ny mpampiasa vola vaovao, hahafahan'izy ireo manatsara ny fiverenana miaraka amin'ny fidirana an-tsehatra kely. Ity sehatra DeFi ity dia nahazo fifantohana fanampiny avy amin'ny tsena tamin'ny famoahana ny mari-pamantarana YFI. Ny vola faribolana DeFi dia manana $ 1.5 miliara marobe.
Na izany aza, voafetra ihany ny famatsiana vola tsy misy afa-tsy 36,666 42,564 - izay manampy ny lanjan'ilay tetikasa Defi. Tamin'ny fotoana nanoratana, ny vola madinika YFI dia mitentina $ 2020 mahery - iray amin'ny avo indrindra amin'ny tsena. Ity dia endrika manaitra iray, raha jerena fa ny volabe dia nampidirina tamin'ny volana jolay 1,050 ihany - tamin'ny $ XNUMX.
Vidio Yearn.finance izao
PancakeSwap dia fifanakalozam-pahefana itsinjaram-pahefana izay ahafahanao mifanakalo famantarana token BEP20 amin'ny Binance Smart Chain, safidy mety sy tsy lafo amin'ny Ethereum. Mitovy amin'ny Uniswap, ity DEX koa dia mampiasa rafitra Automated Market Maker hamorona dobo fitobiana. PancakeSwap dia nanangana ny CAKE famantarana ny tanindrazany tamin'ny volana septambra 2020. Afaka miantsoroka ny CAKE ny mpampiasa iray amin'ny iray amin'ireo kamory marobe atolotra mba hahazoany mari-pamantarana bebe kokoa ho takalony.
Ny sarany ambany napetraka dia nahasarika olona maro tia DeFi amin'ity sehatra ity. - mitondra ny vidin'ny farantsakely hatrany ambony. Ny mari-pamantarana CAKE dia naneho famoriam-bola miavaka tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny 2021. Ny vola madinika Defi dia nanomboka ny taona tamin'ny $ 0.63 ary, ny 26 aprily 2021 - dia nahatratra $ 33.83 avo indrindra.
Midika ho tombony mihoatra ny 5,000% ao anatin'ny efa-bolana. Tamin'ny fotoana nanoratana, ny CAKE token dia nametraka kapitaly marobe mihoatra ny $ 5 miliara, ka nahatonga azy io ho iray amin'ireo mari-pahaizana tsara indrindra DeFi crypto taona.
Zava-dehibe ho fantatra
Tsy ilaina intsony ny milaza izany, ny fitomboan'ny lazan'ny vola faribolana DeFi dia manondro fa ny sehatry ny DeFi misimisy kokoa dia eo am-pahatongavana any amin'ny tsena ara-bola malalaka. Ireo kaonty nosoratanay eto dia manohy mampiseho fa tena misy ny fangatahana, ary toerana ao amin'ny tsena manerantany ho an'ny vokatra sy serivisy avy.
Izany dia nilaza fa misy fironana maromaro izay mitondra an'ity fahombiazana ity. Ohatra, ny mari-pahaizana DeFi dia lafiny iray fotsiny amin'ny tontolo iainana ekena DeFi. Raha ny tena izy, novolavolaina ho fitaovana hanohanana ireo kaontim-pahefana itsinjaram-pahefana - izay manome fotoana maro hafa hanararaotanao ny tranga DeFi.
Miaraka amin'izany ao an-tsaina, andao isika hijery ny sasany amin'ireo sehatra DeFi tsara indrindra izay manjaka amin'ny tsena ankehitriny.
Mividiana PancakeSwap izao
Sehatra DeFi tsara indrindra 2021
Ny tena tanjon'ireo sehatra DeFi dia ny fanapariaham-pahefana ny fizotry ny fampiasam-bola sy ny varotra. Ny iray amin'ireo manintona eto dia ireo vahaolana ireo manolotra mangarahara avo kokoa raha oharina amin'ireo andrimpanjakana ara-bola nentim-paharazana.
Ny sehatra DeFi tsara indrindra amin'izao fotoana izao dia ampiasain'ny dApps na ny protokol descentralised - naorina na Bitcoin na Ethereum. Misy tetikasa vaovao miditra an-tsena saika isam-bolana, manome fotoana ara-bola vaovao ho an'ireo mpampiasa vola sy mpivarotra amin'ny endriny sy habe.
Ireto misy fomba sasany ampiasain'ny dApps sy ny protokol itsinjaram-pahefana ankehitriny:
Mindrana sy mampindrana: Ny sehatra DeFi dia ahafahanao maka indram-bola amin'ny fanananao crypto, raha tsy mila mamita ny dingana KYC ianao, manamarina ny trosanao, na manana kaonty amin'ny banky mihitsy aza ianao. Azonao atao koa ny mampindrana ny fanananao cryptocurrency ho tambin'ny zanabola, manampy amin'ny fihoaram-pefy amin'ny sehatra DeFi resahina.
Valizy nomerika: Ny poketra DeFi crypto tsy miankina amin'ny fanjakana dia mamela anao hanana fifehezana feno amin'ny fanananao sy ny lakilen'ny tenanao manokana amin'ny toerana azo antoka.
Fifanakalozana itsinjaram-pahefana: Ny sehatra DeFi tsara indrindra dia ahafahanao manafoana ny filan'ny mpanelanelana ary hiditra amin'ny varotra amin'ny alàlan'ny fifanarahana marani-tsaina.
Protokol fitantanana fananana: DeFi dia manohana ny rafitra ahafahan'ny mpampiasa manangona vola ho an'ny vokatra fampiasam-bola toy ny fampiasam-bola mandeha ho azy sy ny mpanangona fananana.
Findramam-bola tsy miankina: Ny DeFi dia nanamora ny fahazoanao indram-bola tsy azo antoka amin'ny peer-to-peer.
Teboka tsy azo ihodivirana: Ny sehatra DeFi tsara indrindra dia manome fanampiana bebe kokoa ho an'ny NFT. Ireto dia mari-pamantarana mamela anao hanova fananana izay tsy azo natokana ho an'ny blockchain taloha. Mety tafiditra ao anatin'izany ny kanto, ny hira ary na ny sioka aza!
Fambolena vokatra: Ity vokatra DeFi ity dia ahafahanao mahazo tombony amin'ny fanananao crypto amin'ny alàlan'ny fametrahana azy ireo eo amin'ny sehatra DeFi.
Araka ny hitanao, ny haben'ny indostrian'ny DeFi dia samy hafa be. Y0u dia afaka mahazo fidirana mazava sy tsy misy fetra saika amin'ny serivisy ara-bola rehetra eritreretina - avy amin'ny kaonty tahiry, indram-bola, varotra, fiantohana, sns.
Ka aiza no ahitanao ireo sehatra DeFi tsara indrindra izay hanome anao fidirana amin'ireo endri-javatra mampanantena indrindra an'ity sehatra ity? Etsy ambany, izahay dia nandinika ny safidin'ny sehatra ambony naoty sy ny fomba ahazoanao mandray soa amin'izy ireo.
Nalefa tamin'ny taona 2018, YouHodler dia iray amin'ireo sehatra fampindramam-bola crypto marobe marobe amin'ny lafiny tsena. Izy io dia serivisy ara-bola crypto-fiat voalohany izay manome anao valiny avo lenta amin'ny vola apetrakao. Ny sehatra DeFi dia niara-niasa tamin'ny banky malaza any Eropa sy Suisse mba hiantohana ny fitahirizana azo antoka sy azo antoka ny fanananao nomerika.
YouHodler dia tonga miaraka amin'ny fifanakalozana fifanakalozana ara-barotra izay manolotra fanohanana vola madinika marobe DeFi - anisan'izany ny Compound, DAI, Uniswap, Chainlink, Maker, ary maro hafa. Ny iray amin'ireo endrika mampiavaka an'i YouHodler dia ny famelana anao hametraka Bitcoin, na crypto hafa - mba hanombohana mahazo zanabola eo noho eo.
Ny fifanarahana fampindramambola sy findramam-bola indramina eto amin'ity sehatra ity dia antontan-taratasy mifehy ara-dalàna izay manaraka ny torolàlana avy amin'ny Vondrona Eropeana. Azonao atao ny mahazo hatramin'ny 12.7% amin'ny tahiry crypto anao ary ny fiverenana rehetra ataonao dia hapetraka mivantana ao amin'ny kitaponao YouHodler isan-kerinandro. Ankoatr'izay, afaka mahazo fidiram-bola crypto amin'ny sehatra koa ianao. YouHodler dia manolotra tahan'ny Loan-to-Value mahavariana 90% ho an'ny 20 kriptocurrencies ambony tohanana.
Azonao atao ihany koa ny mahazo fampindramam-bola amin'ny vola fiat toy ny dolara amerikana, euro, franc Swiss, ary pounds British. Ny trosa dia azo esorina eo noho eo amin'ny kaontinao any amin'ny banky tsirairay na amin'ny carte de crédit anao. Ho an'ireo izay manana traikefa bebe kokoa amin'ny tsenan'ny crypto DeFi, YouHodler koa dia nanolotra vokatra roa hafa - MultiHODL sy Turbocharge. Amin'ireto endri-javatra ireto, ny sehatra dia hampiditra vola ny fanananao amin'ny fampindramam-bola marobe mba hahazoanao ny valiny farany.
Na izany aza, raha jerena ny loza mety hitranga, ireo fampiasa ireo dia natokana ho an'ireo mpampiasa vola efa za-draharaha izay mahalala tsara ny atiny sy ny atiny amin'ny tsena ara-bola. Etsy ankilany, raha tsy mitady afa-tsy vola miditra ianao amin'ny fananana crypto anao, dia afaka mahazo valiny avo lenta ianao YouHodler raha mamela anao hitahiry ny fanananao amin'ny toerana azo antoka.
Nexo dia anarana malaza hafa eo amin'ny habakabaka crypto. Ny sehatra dia nanolotra vokatra ara-bola maro izay afaka manolo ny banky nentim-paharazana amin'ny fananana crypto. Nexo dia mamela anao hahazo zanabola amin'ny fananana crypto 18 isan-karazany - ao anatin'izany ny vola madinika DeFi toy ny DAI sy ny Nexo token. Afaka mahazo valiny hatramin'ny 8% amin'ny vola crypto ianao, ary hatramin'ny 12% amin'ny stablecoins.
Ny karamanao dia homena anao isan'andro. Ho fanampin'izany, azonao atao ihany koa ny mametraka vola fiat toy ny euro, dolara amerikana, ary ny pounds pounds britanika mba hamerenana azy ireo. Ankoatry ny kaonty fitahirizana crypto, Nexo dia mamela anao handray indram-bola avy hatrany amin'ny alalàn'ny fiantohana ny fanananao nomerika.
Ny rafitra dia mandeha ho azy tanteraka - ary azonao atao ny manamboatra ny fangatahana indram-bola nefa tsy mila mandalo fanamarinana momba ny trosa. Ny tahan'ny zanabola amin'ny fampindramam-bola Nexo crypto dia manomboka amin'ny APR 5.90%. Ny sandan'ny indram-bola farafahakeliny dia napetraka amin'ny $ 50, ary afaka mahazo zotram-bola hatramin'ny $ 2 tapitrisa ianao. Nexo koa dia nanangana ny fifanakalozam-bola cryptocurrency, izay ahafahanao mividy sy mivarotra mpivady cryptocurrency mihoatra ny 100.
Ny sehatra dia namorona rafitra Nexo Smart mba hahazoana antoka fa mahazo ny vidiny tsara indrindra eo amin'ny tsena ianao amin'ny alàlan'ny fampifandraisana amin'ny fifanakalozana samihafa. Ankoatr'izay, Nexo dia mampanantena ihany koa fa hisy ny fihenan'ny vidiny farany rehefa mametraka kaomandy ianao. Mitovy amin'ny sehatra DeFi hafa, Nexo koa dia nanangana ny volam-pitantananany manokana - ny marika NEXO.
Ny fitazonana ny marika NEXO dia manome anao valisoa marobe amin'ny sehatra - toy ny tamberim-bola avo lenta kokoa amin'ny vola apetrakao, ary ny zanabola ambany amin'ny trosa. Ny tena zava-dehibe kokoa, Nexo dia iray amin'ireo sehatra vitsivitsy izay mandoa dividends ho an'ireo tompony. Raha ny marina dia 30% ny tombom-barotra netin'ity farantsakely DeFi ity no zaraina amin'ireo tompona token NEXO - miankina amin'ny habe sy ny faharetan'ny fampiasam-bola.
Uniswap dia tsy azo lavina fa iray amin'ireo sehatra DeFi malaza indrindra amin'ny tsenan'ny cryptocurrency midadasika. Ny sehatra dia ahafahanao mivarotra token ERC-20 miorina amin'ny Ethereum amin'ny alàlan'ny poketra manokana toa ny Metamask. Tamin'ny taona 2020, ny Uniswap dia nanohana ny volan'ny varotra 58 miliara dolara - ka nahatonga azy io ho fifanakalozana fanapariaham-pahefana lehibe indrindra eo amin'ny tontolon'ny crypto. Ireo isa ireo dia tafakatra 15,000% hatramin'ny taona 2019 - manondro ny halaviran'ny sehatra DeFi tao anatin'ny herintaona mahery.
Ny iray amin'ireo tombony lehibe an'ny Uniswap dia ny tsy filanao mametraka ny fanananao ao anaty lampihazo. Raha atao teny hafa, ity dia fampiharana tsy fitehirizam-bola izay mampiasa dobo fisotroana fa tsy boky manafatra. Tsy ilaina ny fisoratanao anarana ao amin'ny Uniswap protocol na hamita ny dingana KYC.
Azonao atao ny miovaova eo anelanelan'ny mari-pamantarana ERC20 na mahazo isan-jato kely amin'ny sarany voaangona amin'ny alàlan'ny fampidirana ao amin'ny pisotro misy rano. Araka ny nomarihintsika teo aloha, ny Uniswap dia manana ny mari-pamantarana UNI azy manokana ihany koa - izay afaka manome anjaranao amin'ny fifidianana amin'ny fitantanan-tsoratry ny mpamatsy. Ny vidin'ny DeFi dia vao haingana no nanondrotra ny vidiny, nisarika ny fiheverana bebe kokoa ny protokolon'ny UNI.
Vao tsy ela akory izay, Uniswap koa dia nanolotra ny kinova farany an'ny fifanakalozana - nomena anarana hoe Uniswap V3. Izy io dia miaraka amin'ny fanjifana be vola sy sarany. Io dia mamela ny mpamatsy vola azo tamberina arakaraka ny haavon'ny loza mety hitranga. Ny endri-javatra toy izany dia mahatonga ny Uniswap V3 ho iray amin'ireo AMM mora miorina indrindra.
Ny protokol Uniswap dia mikendry ihany koa ny hanome fanatanterahana varotra ambany lalana izay mety hihoatra ny fifanakalozana afovoany. Ireo fanavaozana vaovao ireo dia mety hitarika ny vidin'ny mari-pamantarana UNI DeFi mankany ambony kokoa. Araka ny hitanao, ny sehatra DeFi dia mivoatra hatrany ary mety tsy ho ela dia hanampy vokatra hafa toy ny fampindramam-bola crypto sy fampindram-bola amin'ny ekosistra itsinjaram-pahefana.
Nalefa tamin'ny taona 2018, BlockFi dia nivoatra lasa toerana fandehanana hampitomboana ny fanananao nomerika. Nandritra ny taona maro, ny sehatra DeFi dia nahavita nahazo $ 150 tapitrisa tamina olo-malaza teo amin'ny fiaraha-monina, ary nahazo mpanjifa tsy mivadika manaraka azy. BlockFi dia manome vokatra ara-bola isan-karazany kendrena amin'ny mpivarotra cryptocurrency tsirairay sy andrim-panjakana. Kaonty zanabola BlockFi, BIAS raha fohy - mamela anao hahazo zanabola hatramin'ny 8.6% isan-taona amin'ny cryptocurrency.
Toy ny amin'ireo sehatra DeFi hafa. Ny BlockFi dia mampindrana ireo tahirim-bolan'ny mpampiasa ireo amin'ny olon-kafa sy ny broker andrim-panjakana ary miantoka zanabola amin'izy ireo - izay kosa mandoa ny mpampiasa azy. Izany dia milaza fa zava-dehibe ny manamarika fa ny fametrahana ny mpampiasa dia omena laharam-pahamehana bebe kokoa raha oharina amin'ny fananana orinasa raha ny fampindramambola no resahina.
Ny BlockFi dia mamela ny mpampiasa hampiasa ny fananany nomerika ho antoka, ary mindrana hatramin'ny 50% amin'ny sandan'ny sandam-bola dolara amerikana. Araka ny hitanao, io dia ambany noho ny LTV atolotry ny sehatra hafa toa YouHodler. Etsy ankilany, ny fampindramam-bola dia voahodina saika eo noho eo. Farany, tombony iray hafa amin'ny BlockFi ny manolotra maimaimpoana ho an'ny fifanakalozana eo amin'ny sehatra misy azy.
Na izany aza, ny tahan'ny fifanakalozana dia ambany indrindra raha oharina amin'izay mety ho azonao amin'ny sehatra hafa. Amin'ny ankapobeny, ny BlockFi dia mitana ny toerany amin'ny iray amin'ireo serivisy ara-bola hafa azo isafidianana - ahafahanao mampiasa ny fanananao nomerika hahazoana vola miditra tsimoramora, ary koa hahazoana antoka indram-bola araraotana amin'izany.
Natomboka tamin'ny voalohany ho ETHLend, Aave dia nanomboka ny tsenambarotra ahafahan'ny mpampindram-bola crypto sy ny mpampindram-bola mifampiraharaha amin'ny fe-potoany nefa tsy mila mandalo amin'ny antoko fahatelo. Nanomboka tamin'izay, ny sehatra DeFi dia nitombo ho lasa protokol DeFi izay manolotra vokatra ara-bola maromaro. Ireo dobo fisotroan-dronono nataon'i Aave dia manome vola fanampiana 25 vola crypto, stable ary DeFi.
Anisan'izany ny DAI, Chainlink, yearn.finance, Uniswap, SNX, Maker, ary maro hafa. Ankoatr'izay, Aave dia namoaka ihany koa ny mari-pitondrany - AAVE. Io dia ahafahan'ny tompona token mandray anjara amin'ny fitantanana ny protokol Aave. Ny token AAVE dia azo apetraka ihany koa eo amin'ny lampihazo hahazoana tombony ary koa valisoa hafa.
Aave dia sehatra voalohany amin'ny fampindram-bola crypto. Azonao atao ny mindrana sy mampindrana ny fananana nomerika ao amin'ny Aave amin'ny fomba itsinjaram-pahefana, tsy mila mandefa antontan-taratasy AML na KYC. Amin'ny maha mpampindram-bola anao, dia hametraka am-pahombiazana ny fanananao ao anaty rano fisidinana. Ny ampahany amin'ny pisinina dia hatokana ho tahiry hanoherana ny fiovaovan'ny toetran'ny DeFi. Io koa dia manamora ny fampialan'ny mpampiasa ny volan'izy ireo nefa tsy misy fiatraikany izany.
Ankoatr'izay, ho afaka handray zana-bola amin'ny liquidity omenao amin'ny sehatra ianao. Raha te-mindrana indram-bola ianao dia mamela anao hindrana amin'ny alàlan'ny fihoaram-pefy ny fanananao. Ny LTV amin'ny indram-bola azonao dia matetika 50 ka hatramin'ny 75%.
Na eo aza izany, Aave dia manavaka ny tenany ihany koa amin'ny fanolorana vokatra miavaka hafa - toy ny fampindramam-bola crypto tsy azo antoka sy ny fifanakalozana tahan'ny. Hodinihintsika amin'ny antsipiriany bebe kokoa ity ao amin'ny fizarana 'Crypto Loans at DeFi Platforms' amin'ity torolàlana ity. Na izany aza, such karazana fiantohana tokana dia namela an'i Aave hanana tanjaka amin'ny sehatry ny DeFi. Raha ny marina, raha ampitahaina amin'ny kaonty DeFi hafa amin'ity habaka ity, Aave dia manolotra fitaovam-piadiana tsy manam-paharoa.
Celsius dia sehatra iray hafa mifototra amin'ny blockchain izay namolavola ny marika zanatany manokana. Ny famantarana CEL dia hazondamosin'ny tontolo iainana Celsius. Ity token ERC-20 ity dia azo ampiasaina ao anatin'ny protokol Celsius mba hampitomboana ny tombony azo avy amin'ny vokatra ara-bola.
Raha eo amin'ny lafiny fampiasana dia mamela anao hahazo zanabola amin'ny fanananao crypto i Celsius, miaraka amin'ny taha 17.78%. Mihoatra lavitra ny salan'isan'ny indostria izany - na izany aza, mila mitazona mari-pamantarana CEL ianao mba hahazoanao valiny avo io. Celsius dia mamela anao hampiasa cryptocurrency ho toy ny antoka hindrana vola fiat na fananana nomerika hafa.
Averina indray, ny tahan'ny zanabola eto dia mampifaninana mampino - apetraka amin'ny 1% APR ihany. Ity dia eo amin'ny proviso fa manana mari-pamantarana CEL ampy apetraka amin'ny lampihazo ianao. Raha tsorina, ny tombontsoa azonao amin'ny sehatra dia miankina betsaka amin'ny habetsaky ny CEL tazoninao. Raha izany, raha te hampiasa Celsius ianao dia tsara raha ampiana CEL amin'ny portfolio-nao crypto.
Rehefa dinihina tokoa, ireo izay mihazona ary Ny mari-pamantarana CEL dia afaka mahazo ny tambiny avo indrindra amin'ny tahirim-bolany, ary koa ny fihenan'ny zana-bola amin'ny trosa. Raha ny tombom-barotra azo, ny CEL token dia nitombo 20% ny vidiny nanomboka tamin'ny fiandohan'ny 2021. Na izany aza, zava-dehibe ny manamarika fa ny fampiasana ny token CEL dia voafetra ivelan'ny tontolo iainana Celsius.
Ny fitantanam-bola dia azo raisina ho toy ny protokolola mpampindram-bola lehibe indrindra amin'ny sehatry ny DeFi. Tahaka ny ankamaroan'ny sehatra DeFi hafa noresahina androany, ny Compound protocol dia miorina amin'ny blockchain Ethereum. Na dia nifantoka afovoany aza izy tamin'ny voalohany, tamin'ny alàlan'ny fanombohana ny mari-pitondrany, ny Compound dia mandray ny dingana voalohany mankany amin'ny lasa fikambanana itsinjaram-pahefana notarihin'ny vondrom-piarahamonina.
Amin'ny fotoana anoratana, ny Compound dia manohana vola crypto 12 sy vola madinika miorina - izay misy koa ny mari-pamantarana DeFi malaza. Ny toerana fampindramam-bola crypto amin'ny Compound dia miasa mitovy amin'ny sehatra DeFi hafa. Amin'ny maha mpampindrana anao dia azonao atao izany hahazoana ny zanabola amin'ny volanao amin'ny alàlan'ny fampidiram-bola amin'ny sehatra. Raha misambotra ianao dia afaka mahazo fidiram-bola eo noho eo fandoavana mahaliana.
Na izany aza, ny printsesa iray manontolo dia manamora amin'ny alàlan'ny vokatra vaovao antsoina hoe fifanarahana cToken. Ireto ny EIP-20 maneho ny fananana ifotony - izay manara-maso ny sandan'ny fananana napetrakao na nesorinao. Ny fifampiraharahana amin'ny protokol Compound dia mitranga amin'ny alàlan'ny fifanarahana cToken. Azonao atao ny mampiasa azy ireo hahazoana zana-bola, ary ho toy ny antoka hahazoana trosa. Azonao atao ny 'mint' hahazoana ny tananao amin'ny cTokens na mindrana azy ireo amin'ny alàlan'ny protokol Compound.
Compound koa dia mampiasa algorithm sarotra izay mamaritra ny zanabola amin'ny sehatra. Araka izany, tsy toy ny sehatra DeFi hafa, miovaova ny tahan'ny zanabola - arakaraka ny famatsiana sy ny fangatahana ao anaty ny protokolota. Amin'ny alàlan'ny token governance Comp - Drafitra marobe hahatratra ny fanapariaham-pahefana tanteraka. Hatao izany amin'ny alàlan'ny fanomezana zon'ny mpifidy sy fanomezana fanentanana ho an'ireo mpihazona ny COMP eo amin'ny sehatra DeFi.
MakerDAO dia iray amin'ireo sehatra DeFi voalohany nahasarika ny mason'ny mpampiasa vola crypto. Natomboka tamin'ny taona 2017 ny tetikasa ary miasa ho toy ny rafitra vault dizitaly itsinjaram-pahefana. Azonao atao ny mametraka tahiry crypto miorina amin'ny Ethereum ary ampiasao izy ireo mba hialana amin'ny marika teratany platform - DAI. Araka ny efa noresahintsika teo aloha, ny sandan'ny DAI dia mitovy amin'ny an'ny dolara amerikana. Ny DAI izay vokarinao amin'ny MakerDAO dia azo ampiasaina ho antoka mba hitrosa indram-bola.
Na izany aza, tsarovy fa ny fifanakalozana ny marika ERC-20 ho takalon'ny DAI dia tsy maimaim-poana amin'ny lampihazo. Handoavina saram-panao mpanamboatra ianao rehefa manokatra vault. Ity sarany ity dia afaka mitandrina indraindray ary havaozina ho azy eo amin'ny lampihazo. Noho io antony io, raha mampiasa Maker Vaults ianao, dia tsara kokoa ny mitazona ny tahan'ny fiantohana arak'izay azo atao - mba hisorohana ny famonoana.
Ivelan'ny ecosystem MakerDAO dia miasa toy ny vola madinika DeFi hafa ny DAI. Azonao atao ny mampindrana azy, na mampiasa azy io mba hahazoana vola miditra. Tao anatin'izay fotoana izay dia nampitombo ny asany ny DAI mba hampidirana ny fividianana NFT, fampidirana anaty sehatra filalaovana ary orinasa eCommerce. Ankoatry ny DAI, MakerDAO dia manana vola fitantanana fanampiny - Maker. Tahaka ireo vola madinika DeFi hafa, ny fananana Maker dia hahazoanao miditra amin'ny zon'ny mpifidy sy ny sarany ambany kokoa amin'ny sehatra.
Ireo sehatra resahina etsy ambony dia manome topy maso ny tambajotra DeFi mivelatra haorina androany. Raha ny fandehany dia ho hitan'ny vondrom-piarahamonina ao aoriany ny hoavin'ny sehatry ny DeFi. Raha manintona ny saina bebe kokoa ny indostria dia tokony hita taratra amin'ny vidin'ny farantsakely DeFi tsirairay avy.
Araka ny hitanao dia nanova ny sehatry ny vola ny tontolon'ny DeFi. Ireto sehatra DeFi ambony ireto dia mikendry ny hanova ny indostria amin'ny alàlan'ny fampiasana teknolojia Blockchain. Ho setrin'izany, hahazo ny mangarahara sy ny fifehezana tsaratsara kokoa amin'ny fanananao ianao.
Raha mino ianao fa manana hery lehibe hifehezana ny DeFi amin'ny ho avy, ny iray amin'ireo hetsika tsara indrindra tokony hatao dia ny mampiasa vola amin'ny farantsakely DeFi. Ho an'ireo izay vaovao amin'ny habaka cryptocurrency, dia handray soa avy amin'ny fitarihana kely amin'ity faritra ity ianao. Noho izany, nametraka torolàlana momba ny fomba hividianana farantsa DeFi tsara indrindra izahay ao amin'ilay faritra eto ambany.
Ahoana no hividianana vola ho an'ny DeFi
Amin'izao fotoana izao dia antenaina fa manana hevitra marim-pototra momba ny inona ny sehatra DeFi ianao, ary iza amin'ireo farantsakely DeFi no manjaka amin'ny tsena ankehitriny. Mba hahazoana antoka fa ny volanao DeFi voafidy dia azo vidiana amin'ny fomba azo antoka sy mahomby indrindra - eto ambany dia mandalo anao amin'ny dingana rehetra izahay.
Dingana 1: misafidy mpampindram-bola an-tserasera voafehy
Ny sehatra voafidy fanapahana no manome anao fidirana tsy voafetra amin'ny fananana nomerika. Na izany aza, ho an'ireo izay te hitandrina kokoa amin'ny fampiasam-bolany, dia manolo-kevitra anao izahay hijery nifehy sehatra. Ohatra, misy fomba roa hividiananao vola madinika DeFi - iray amin'ny alàlan'ny cryptocurrency fifanakalozana, na amin'ny alàlan'ny Internet broker.
Raha misafidy fifanakalozam-bola afovoany na itsinjaram-pahefana ianao, dia tsy hanana fahafaha-mianina amin'ny fividianana vola madinika DeFi ho takalon'ny vola fiat. Raha tokony ho izany dia tsy maintsy miorim-paka amin'ireo vola madinika marin-toerana ianao toy ny USDT.
Etsy ankilany, raha misafidy broker an-tserasera voafehy toa ny Capital.com ianao - dia afaka hivarotra vola madinika Defi ary hamatsy vola ny kaontinao amin'ny dolara amerikana, euro, pounds britanika ary maro hafa.
Raha ny marina dia afaka mametraka vola eo noho eo ianao amin'ny carte de debit / carte de crédit ary koa ny e-wallet toa an'i Paypal.
Ho an'ireo tsy mahalala, Capital.com dia sehatra varotra CFD malaza be izay voafehin'ny FCA any UK sy CySEC any Sipra.
Ny sehatra dia manohana tsipika lava an'ny tsenan'ny vola madinika DeFi - toy ny LINK, UNI, DAI, 0x, ary ny antontany maro hafa.
Na eo aza izany, raha tsy manolotra serivisy kitapom-batsy anaty trano ny brokeranao voafantina, dia te-hahita kitapom-bola nomerika ivelany hitahiry ireo DeFi Tokens anao koa ianao. Mazava ho azy fa raha tsy apetrakao amin'ny sehatra DeFi izy ireo hahazoana fidiram-bola mandalo.
Dingana 2: Midira amin'ny tranokalan'ny varotra voafantina DeFi
Ny fanokafana kaonty amin'ny sehatra fifanakalozana vola madinika DeFi dia mora kokoa noho ny hatramin'izay. Ny sisa hataonao dia fenoy ny fisoratana anarana haingana. Anisan'izany ny anaranao feno, daty nahaterahanao, ny adiresy fonenanao ary ny antsipirian'ny fifandraisanao. Izany dia nilaza fa raha mampiasa sehatra voafetra toy ny Capital.com ianao dia tsy maintsy manamarina ny maha-ianao anao ao anatin'ny fizotran'ny KYC ihany koa.
Azonao atao ny mamita ity dingana ity eo noho eo eo noho eo amin'ny alàlan'ny fampakaranao ny porofo mombamomba anao - toy ny kopian'ny pasipaoronao na ny fahazoanao mitondra fiara. Ao amin'ny Capital.com dia hanana 15 andro ianao hamitaana ity dingana ity. Raha tsy mahavita an'io ianao dia hijanona ho azy ny kaontinao. Vantany vao nakarina sy voamarina ireo antontan-taratasy, dia tsy ho voarakitry ny tsena DeFi am-polony ianao - tsy misy komisiona daholo!
Dingana 3: Famatsy vola ny kaontinao an-tserasera
Alohan'ny ahafahanao mivarotra farantsakely DeFi ao amin'ny Capital.com dia tsy maintsy mamatsy vola ny kaontinao ianao.
Ao amin'ny Capital.com, azonao atao izany amin'ny alàlan'ny carte de crédit, carte debit, transfer wire na banky elektronika toa an'i ApplePay, PayPal, ary Trustly.
Ny tsara indrindra, ny Capital.com dia tsy mitaky saram-bola apetraka ary afaka mamatsy vola ny kaontinao amin'ny $ / £ 20. Miaraka amin'izany, raha mametraka vola amin'ny alàlan'ny famindrana banky ianao dia mila manampy $ / £ farafaharatsiny. 250.
Dingana 4: Tadiavo ny tsenanao Coin voafidy DeFi
Vantany vao nanangana ny kaontinao ianao dia vonona hanomboka varotra varotra DeFi. Ao amin'ny Capital.com - tsotra ny fizotrany. Ny hany mila ataonao dia ny mitady ny farantsanao DeFi nofidinao ary avy eo tsindrio ny valiny izay feno.
Ohatra, raha te-hivarotra ny Uniswap ianao dia afaka miditra fotsiny amin'ny 'UNI' ao anaty bara fikarohana.
Dingana 5: Vola varotra DeFi
Ankehitriny, ny sisa ataonao dia mamaritra ny isan'ny famantarana DeFi tianao hivarotra. Raha tsy izany, azonao atao koa ny mampiditra ny habetsaky ny vola tianao iharan-doza amin'ny vola Defi resahina.
Na izany na tsy izany, raha vao manamafy ny baiko ao amin'ny Capital.com ianao dia ho tanterahina eo noho eo. Ny tsara indrindra - ny Capital.com dia tsy handoa onitra anao na iray isanjato amin'ny komisiona na sarany hividianana vola madinika Defi!
Raha vantany vao nividy ny farantsakely DeFi tsara indrindra ho an'ny tanjonao ara-bola ianao dia misy safidy maro eo amin'ny latabatra. Ohatra, azonao atao ny mihazona azy ireo, mifanakalo azy ireo, na mampiditra azy ireo amin'ny lasa protokol DeFi. Ho fanampin'izay, araka ny efa nifanakalozanay hevitra momba an'ity torolàlana ity - azonao atao ihany koa ny mametraka farantsakely DeFi na mampindram-bola amin'ny fampiasana azy ireo ho antoka.
Zava-dehibe, ny sehatra DeFi dia efa nahavita niteraka fientanam-po be teo amin'ny tsena. Ny habaka itsinjaram-pahefana dia nahasarika renivola fampiasam-bola mahavariana tao anatin'ny 12 volana lasa fotsiny - nitombo be dia be tao anatin'ny taona. Araka ny hitanao mazava tsara, misy sehatra maromaro izay nahavita nitondra ny tombony voalaza etsy ambony an'ny DeFi ho an'ny besinimaro.
Amin'ireo tranga marobe ampiasaina, misy lafiny roa manokana izay nahazo vahana teo amin'ireo mpampiasa vola crypto sy ireo mpivarotra. Ireo no kaonty fitehirizana crypto sy trosa crypto natolotry ny sehatra DeFi.
Araka izany, ao amin'ny fizarana manaraka amin'ity torolàlana ity dia hijerena ireo rindranasa ireo izahay sy ny fomba hanararaotanao azy ireo hampitomboana ny fanananao crypto.
Kaonty Crypto Savings ao amin'ny DeFi Platforms
Araka ny efa noresahintsika teo aloha, ny sehatra DeFi tsara indrindra dia manana vokatra ara-bola maromaro nilahatra ho an'ireo mpankafy crypto. Amin'ireo mety samy hafa rehetra, ny hevitra momba ny kaonty crypto tahiry dia toa nahasarika ny sain'ny olona indrindra. Ny kaonty fitehirizana crypto dia tena toa azy - mamela anao hahazo valiny maivana amin'ny fampiasam-bolanao.
Na izany aza, raha ampitahaina amin'ny rafitra ara-bola nentim-paharazana, ny sehatra DeFi tsara indrindra dia manome zana-bola ambony kokoa amin'ny tahirim-bolanao. Alohan'ny hanapahanao hevitra amin'ny fampiasam-bola amin'ny kaonty crypto fitehirizana dia zava-dehibe amin'ny fahatakarana ny fomba fiasan'ny indostria.
Inona ireo kaonty Crypto Savings?
Ny kaonty fitahirizana Crypto dia izay voalaza ao amin'ny firapotsy fotsiny - kaonty fitehirizana ho an'ny crypto-nao. Raha tokony apetrakao amin'ny banky nentim-paharazana ny vola fiat, dia hampiditra ny fanananao crypto ao amin'ny sehatra fampindramam-bola DeFi ianao. Ho setrin'izany, afaka mahazo zanabola amin'ny tahirim-bolanao ianao.
Raha ny tena izy, ny zavatra ataonao dia mampindrana ny fanananao amin'ireo mpindrana crypto amin'ilay sehatra iray ihany. Ho setrin'izany, mandoa zana-bola izy ireo amin'ny mindrana ny fanananao crypto. Araka izany, ny kaonty fitahirizam-bola crypto dia manampy amin'ny famatsiam-bola ny indram-bolan'ny peer-to-peer atolotry ny sehatra Defi tsara indrindra.
Sehatra fampindramam-bola DeFi
Matetika, amin'ny sehatra fampindramam-bola afovoany - tsy maintsy mandalo fizotran'ny KYC sarotra ianao hanararaotana ny kaonty tahiry. Ankoatr'izay, ny zanabola atolotra dia ho faritan'ny orinasa ihany. Etsy ankilany, ny sehatra DeFi dia miasa ho toy ny protokol - midika izany fa azon'ny rehetra jerena izy ireo nefa tsy mila manaraka ny fomba fanao KYC.
Tsy izany ihany, fa ny kaonty tsy miankina amin'ny fanjakana, midika izany fa tsy mila atolotrao amin'ny sehatra mihitsy ny volanao. Araka izany, mandeha ho azy ireo sehatra fampindramam-bola itsinjaram-pahefana sy ireo kaonty tahiry arosony. Midika izany fa ny rafitry ny fitantanana no mamaritra ny zanabola.
Amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra, ny sehatra fampindramam-bola DeFi tsara indrindra dia hanana zana-bola miovaova izay miankina amin'ny famatsiana sy ny fangatahana fananana amin'ny protokol tsirairay avy. Ankoatr'izay, ny mpampindram-bola dia afaka mandray indram-bola amin'ny alàlan'ny sehatra DeFi - nefa tsy mila mandalo fizotran'ny fanamarinana na fanamarinana bola.
Izahay dia mandrakotra ny lohahevitra momba ny fampindramam-bola crypto amin'ny fomba fijerin'ny mpampindram-bola amin'ny antsipiriany bebe kokoa ao amin'ny fizarana manaraka amin'ity torolàlana ity. Na eo aza izany, tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay, ny hevitra momba ny fampindramambola DeFi dia nitombo be. Na dia mety misy zana-bola avo kokoa aza ho an'ireo mindrana, ny fanamorana ny fanamarinana dia mahatonga ny sehatra DeFi ho manintona kokoa - indrindra ho an'ireo izay heverina fa manana isa naoty ratsy.
Ahoana ny fiasan'ny DeFi Lending?
Amin'ny sehatra DeFi tsara indrindra, dia hahita ny teny hoe 'fambolena vokatra' ianao - izay manondro ny fijanonan'ny mari-pamantarana ERC-20 hahazoana zanabola. Amin'ny tranga maro, ny kaonty crypto sy ny fambolena vokatra dia tsy dia samy hafa be. Miaraka amin'io voalaza io, rehefa mandalo sehatra DeFi ianao dia ho toy ny mpamatsy vola. Midika izany fa rehefa apetrakao ny volanao dia ho ampiana ao anaty rano fisotroan-dronono izy ireo.
Ho valin'ny fanomezana an'ity vola azo antoka ity dia hahazo valisoa ianao amin'ny lafiny fahalianana.
Ny sehatra fampindramam-bola voafidy dia mihazakazaka amina karazana protokolota mandeha ho azy.
Ohatra, ny sehatra DeFi tsara indrindra toa ny Compound sy Aave dia namorona ny antontan-taratasin'izy ireo manokana - izay azon'ny rehetra idirana.
Ny fifanakalozana rehetra amin'ny sehatra DeFi toy izany dia tanterahina amin'ny alàlan'ny fifanarahana maranitra (Liquidity Pools).
Izany dia miantoka fa ny fizotran'ny fampindramam-bola sy ny mindrana dia tanterahina tsara. Ireo fifanarahana marani-tsaina dia hampihatra ny fifampiraharahana raha toa ka mahafeno ireo fepetra voafaritra voafaritra mialoha amin'ny alàlan'ny sehatra. Araka izany, rehefa manokatra kaonty fitahirizam-bola DeFi ianao dia mandefa ny renivohitra amin'ny fifanarahana marani-tsaina.
Ho setrin'izany, hahazo valiny ianao amin'ny endrika mari-pamantarana nomerika na fatorana manaporofo fa tompon'ny fanananao tsirairay avy ianao. Amin'ny sehatra DeFi tsara indrindra, ireo fifanarahana mahira-tsaina ireo dia voamarina tsara ary azon'ny besinimaro atrehana. Na izany aza, araka ny azonao an-tsaina - mety mila fahalalana coding kely ianao hanamarinana ny angona.
Androany, tsy vitan'ny manokatra kaonty fitahirizana crypto ianao, fa afaka mahazo zanabola amin'ny mari-pamantarana ERC-20 maro sy stablecoins koa.
Noho izany, tokony hanokatra kaonty fitehirizana crypto amin'ny sehatra DeFi ve ianao? Eny, araka ny azonao an-tsaina, ny tombony lehibe amin'ny fanokafana kaonty crypto dia ny fahazoana zanabola. Raha tokony hitahiry ny fanananao dizitaly ao anaty kitapom-bolanao ianao dia ho afaka handray crypto bebe kokoa noho izay nindrana anao. Ny zava-dehibe dia tsy mila manandratra rantsan-tànana ianao - satria homena anao amin'ny fomba tsotra ny fiverenanao.
Saingy, amin'izao andro izao, mpampiasa vola marobe no misafidy ny hampindrana stablecoins toa ny DAI. Io dia hahafahanao mampitombo ny renivohinao raha tsy misy ny risika amin'ny fihoaram-pefy tafiditra amin'ny vola crypto mahazatra. Ankoatr'izay, sehatra DeFi maro no mamela anao hametaka ny mari-pamantarana fitantanan'izy ireo.
Mba hanampiana anao hahafantatra ny fomba fiasan'ny kaonty crypto fitehirizana, dia namorona ohatra eto ambany izahay izay manarona ireo lafin-javatra lehibe rehetra.
Avelao izahay handinika fa mitady hanokatra kaonty crypto fitahirizana ho an'ny fanananao Ethereum ianao.
Mankanesa any amin'ny sehatra DeFi nofidinao ianao hananganana ny kaonty crypto fitahirizanao.
Ampifandraiso amin'ny kitapom-bolanao cryptocurrency ny sehatra DeFianao.
Safidio ny Ethereum amin'ny lisitry ny vola fanampiana izay azo ampindramina.
Ny sehatra dia hampiseho aminao ny habetsaky ny fahalianana ho azonao amin'ny tsatokao.
Safidio ny ohatr'i Ethereum tianao apetaka.
Rehefa vonona - manamafy ny fampiasam-bola.
Aza adino fa amin'ny sehatra maro, ny teti-bola toy izany dia handoa vola anao amin'ny entona. Araka izany, alao antoka fa manamarina ny vola lany ianao alohan'ny hametrahanao ny kaonty crypto anao. Ankehitriny, rehefa niresaka momba izany teo aloha isika - rehefa mampiditra vola crypto ianao, dia miasa amin'ny maha-mpampindram-bola crypto anao.
Maro amin'ireo sehatra DeFi ireo no manolotra indram-bola crypto - mamela ny hafa hisambotra ny fanananao. Amin'ity toe-javatra ity dia hampiasa ny fanananao nomerika ho antoka ianao, fa tsy hametraka azy ireo any amin'ny kaontim-bola.
Ao amin'ny fizarana etsy ambany dia manazava ny fomba ahazoanao tombony amin'ny trosa crypto amin'ny sehatra DeFi tsara indrindra.
Findrana Crypto ao amin'ny DeFi Platforms
Raha mpankafy crypto ianao, dia mety ho efa fantatrao ny momba ilay paikady 'mividy sy mitazona'. Raha tsorina, rehefa 'HODLing' ny fanananao nomerika ianao, dia voaro tsara ao anaty kitapom-bola azo antoka - mandra-pahatonganao vonona handoa vola. Na izany aza, rehefa mandeha dia avelanao fotsiny ny farantsanao hipetraka ao anaty poketra.
Ny fampindramam-bola Crypto sy ny sehatra fampindramam-bola dia manome vahaolana hafa momba izany - izay ahafahanao miantoka ny fananana crypto mba hahazoanao valiny. Amin'ny teny tsotra, ny fampindramam-bola crypto dia miasa amin'ny maha-solo-bolan'ny kaonty tahiry azy. Raha tokony ho mpampindram-bola ianao ary mahazo zanabola amin'ny fanananao, dia hampiasa ny cryptocurrency mba hividianana findramam-bola.
Inona ireo fampindramambola Crypto?
Ho an'ny karazana fampiasam-bola rehetra, ny fidirana amin'ny liquidity dia iray amin'ireo fiheverana lehibe indrindra. Raha atao teny hafa, dia tsara indrindra ny mahay manome vola ny fanananao amin'ny fotoana rehetra. Na izany aza, tsy toy ny fiarovana nentim-paharazana, hafa kely ny tsenan'ny cryptocurrency.
Avelao izahay haka sary an-tsaina fa manana 10 BTC ianao, saingy mitady vola azo antoka ianao.
Raha jerena ny tsena ankehitriny, dia tsy te hivarotra ny fanananao ianao satria antenainao fa hiakatra be ny vidin'ny BTC mandritra ny fotoana maharitra.
Raha izany dia tsy te-hampidina ny crypto anao ianao, satria rehefa mividy azy amin'ny fotoana manaraka ianao dia mety ho vitsy kokoa ny Bitcoin.
Eo no ilana ny sehatra fampindramam-bola crypto. Amin'ny toe-javatra toy izany, azonao atao ny mampiasa ny Bitcoin ho antoka, mba hahazoanao indram-bola aloa amin'ny crypto na fiat currency. Na izany aza, raha jerena ny toetran'ny volafotsy cryptocurrency miovaova, dia tsy maintsy hiantoka BTC bebe kokoa ianao noho ny sandan'ny trosa azonao.
Typically, ny fampindramam-bola crypto toy izany dia mitaky anao handoa sarany kely ihany koa. Tsy hitovy amin'ny sehatra DeFi mankany amin'ny iray hafa izany. Ohatra, ao amin'ny Nexo, azonao atao ny mahazo fampindramam-bola crypto amin'ny 5.9% APR fotsiny. Raha ao amin'ny BlockFi, azonao atao ny mahazo zana-bola hatramin'ny 4.5%.
Rehefa avy mamerina ny indram-bola miaraka amin'ny zanabola ianao, dia haverina aminao ny fanananao crypto. Tsy hampidi-doza fotsiny ny kitapom-bolanao crypto raha tsy mandoa ny indram-bola ianao, na mihena ny sandan'ny antoka azonao. Amin'ity tranga ity dia tsy mila manampy antoka fanampiny ianao.
Ny iray amin'ireo tombony lehibe amin'ny fampindramam-bola crypto dia ny tsy fanamarinana na fanamarinana trosa anao. Amin'ny teny tsotra, raha ampitahaina amin'ny banky nentim-paharazana - mora kokoa ny fampindram-bola crypto. Araka izany, tsy mila iharan'ny fanamarinana miorina amin'ny tantaran'ny trosanao na ny vola azonao ianao. Ny sehatra DeFi tsara indrindra dia mamela anao hanapa-kevitra amin'ny fe-potoana fampindramam-bola ihany koa, hanome anao fahalalahana bebe kokoa.
Ny fampindramam-bola DeFi Crypto tsy misy fiantohana
Na dia mitaky anao hametraka antoka aza ny ankamaroan'ny sehatra crypto afovoany, dia afaka mahita sehatra DeFi izay manome findramam-bola ianao nefa tsy mametraka misy pananana. Ireo dia antsoina indrindra hoe findramam-bola crypto tsy azo antoka, izay manolotra trosa maharitra.
Ohatra, iray amin'ireo sehatra DeFi tsara indrindra - Aave, manome anao fidirana amin'ny fampindramam-bola Flash - izay, tsy ho takiana aminao ny hanome antoka. Ho afaka hindrana fananana kosa ianao raha mbola mandoa ny indram-bola ao anatin'ny fifanakalozana blockchain iray.
Na izany aza, ny fampindramam-bola crypto tsy azo antoka toy izany dia natao voalohany indrindra ho an'ny mpamorona. Izany dia satria mila manangana fifanarahana marani-tsaina ianao raha te hangataka indram-bola, ary avereno ao anatin'ny fifanakalozana iray ihany. Raha izany, raha mitady hanararaotra ny indram-bola crypto ianao nefa tsy misy collatmarina izany, alao antoka fa matoky ianao amin'ny fomba fiasan'ny fizotrany.
Sehatra fampindramam-bola DeFi Crypto
Araka ny efa fantatrao, ny sehatra DeFi tsara indrindra dia voahidy toerana, izay mandeha ho azy ny tetezamita fa tsy tantanan'ny olona. Ohatra, ireo mpamatsy DeFi toa an'i Aave sy Compound dia mampiasa fifanarahana marani-tsaina izay mampiasa algorithms izay mihazakazaka amin'ny kaopikan'izy ireo mba hamoronana fandoavan-trosa mandeha ho azy.
Ankoatr'izay, ireo protokolola ireo dia mangarahara tanteraka, satria miorina amin'ny blockchain. Tsy toy ny sehatra afovoany, tsy misy rafitra mifehy - izany no antony ahazoanao miditra amin'ny fampindramam-bola crypto nefa tsy mila mamita ny fizotran'ny fanamarinana. Ho fanampin'izay, afaka mahazo indram-bola crypto ianao amin'ny vola fiat, vola madinika DeFi, na stablecoins toa USDT.
Ahoana ny fomba fiasan'ny fampindramam-bola DeFi Crypto
Mba hamafana ny zavona, dia namorona ohatra iray momba ny fomba fiasan'ny trosa crypto amin'ny teny azo ampiharina.
Eritrereto hoe te haka trosa crypto ianao amin'ny alàlan'ny vola madinika BTC ho antoka.
Mila ny fampindramam-bola ao amin'ny UNI ianao.
Midika izany fa mila mametraka ny vidin'ny UNI iray amin'izao fotoana izao amin'ny BTC ianao.
Raha ny vidin'ny tsena ankehitriny, ny UNI iray dia mitovy amin'ny 0.00071284 BTC.
Ny mpamatsy crypto voafidinao dia mitaky 5% ny zana-bolanao.
Aorian'ny roa volana dia vonona ianao ny hamerina ny trosa ary hanavotra ny Bitcoin anao.
Midika izany fa tsy maintsy apetrakao ny vola indramina ao amin'ny UNI miampy ny 5% amin'ny zanabola.
Vantany vao averinao ny indram-bola, dia ho azonao ny vola apetrakao Bitcoin.
Araka ny hitanao, amin'ity ohatra ity - nahazo ny indram-bolanao tao amin'ny UNI ianao nefa tsy nivarotra ny Bitcoin anao. Amin'ny lafiny iray amin'ny fifanakalozana, ny mpampindram-bola crypto dia nahazo ny UNI voalohany, ary koa ny fandoavana zanabola 5%. Izany dia nilaza fa zava-dehibe ny fiheverana ny fiovan'ny tsenan'ny cryptocurrency mihitsy.
Raha izany dia mety mila manao collateralize be loatra ianao. Ohatra, amin'ny MakeDAO - takiana aminao ny hametraka petra-bola mitentina 150% farafahakeliny ny sandan'ny trosanao. Ka, avelao isika hilaza fa te-hindrana UNI mitentina 100 $. Ao amin'ny MakerDAO - tsy maintsy hametraka BTC $ 150 ianao ho antoka ahazoana ny indram-bola.
Raha ny vidin'ny BTC dia milatsaka ambany $ 150, dia mety mila mandoa sazy famonoana ianao. Na eo aza izany, ny fampindram-bola crypto dia mety ho fomba iray mahomby indrindra hahitanao tombony amin'ny habaka DeFi. Tsy hanome anao fidirana eo noho eo fotsiny amin'ny liquidity io fa hamonjy anao amin'ny manahirana anao amin'ny alàlan'ny serivisy ara-bola nentim-paharazana.
Coins DeFi tsara indrindra - Ny ambany
Farany, tsy mitsaha-mivoatra ny indostrian'ny DeFi. Tao anatin'ny fotoana fohy monja dia nahavita nitombo ny sehatra DeFi nanomboka ny maha ampahany andrana amin'ny tontolo ara-bola ka hatrany amin'ny tontolo iainana lehibe ankehitriny. Na dia mety hiseho ho sehatry ny akany aza izy izao, azo inoana fa ny fangatahana DeFi dia horaisin'ny tsena midadasika kokoa.
Raha vantany vao manjary mahazatra ny tranga, dia hidina amin'ny fiainana sy ny fiainana andavanandro ny lafiny samihafa amin'ny DeFi. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny DeFi dia manana ny fahafahany manova ny tontolon'ny ara-bola araka ny ahalalantsika azy.
Na izany aza, ilaina ny mitadidy ao an-tsaina fa ny tsenan'ny famatsiam-bola itsinjaram-pahefana dia mbola vaovao ihany. Toy ny fampiasam-bola hafa rehetra, dia mbola misy ny risika mety hitranga eto. Araka izany, ho hitanao fa sarobidy ny fanaovana ny fahazotoanao sy ny fahazoanao mahita ny fomba fivoaran'ity rafitra ara-bola tanora ity.
Inona no atao hoe DeFi?
DeFi dia mijoro ho an'ny famatsiam-bola itsinjaram-pahefana - izay teny nomena ny serivisy ara-bola izay tsy manana fahefana foibe. Mba hanomezana anao hevitra tsara kokoa, ny ankamaroan'ny sehatra ara-bola ankehitriny dia fehezin'ny orinasa iray. Raha ampitahaina, ny sehatra DeFi dia tantanan'ny protokolon'ny governemanta natsangana tamin'ny sakana ary mihazakazaka mampiasa fananana itsinjaram-pahefana toa ny crypto.
Inona no fampiasana ny DeFi?
Sehatra mivoatra haingana ny DeFi. Androany, afaka mahita sehatra DeFi maromaro manolotra serivisy mandeha ho azy ianao. Tafiditra ao anatin'izany ny fifanakalozana, ny fampindrana, ny mindrana, ny fiantohana, ny fitantanana ny fananana ary ny fikambanana hafa izay tsy fehezin'ny orinasa tokana.
Inona avy ireo mari-pamantarana DeFi?
Betsaka ny sehatra DeFi no nandefa ny marika DeFi azy ireo izay hanampy amin'ny fitantanana ny kaonty. Ireo manana ireo marika famantarana zanatany ireo dia afaka mahazo zon'ny mpifidy amin'ny ekosistema DeFi tsirairay avy.
Inona avy ireo farantsakely DeFi tsara indrindra?
Ny mari-pamantarana DeFi tsara indrindra dia nihanalaza be hatramin'ny niandohan'ny taona 2021. Tamin'ny fotoana nanoratana - ny sasany amin'ireo mari-pahaizana DeFi tsara indrindra amin'ny resaka kapitalisma dia misy UNI, LINK, DAI, ZRX, MKR, COMP, ary CAKE.
Ahoana ny fomba hisafidianana ny vola madinika DeFi tsara hampiasana vola?
Toy ny amin'ny fananana azo amidy rehetra, tsy azo atao mihitsy ny maminavina izay farantsakely DeFi hanome anao ny fiverenana avo indrindra. Na izany aza, azonao atao ny mahazo fahatakarana tsara kokoa ny tsenan'ny DeFi amin'ny alàlan'ny fianaranao momba ireo protokol DeFi samihafa sy ireo tranga fampiasan'izy ireo.
Vidio izao ny famantarana ataontsika "DeFi Coin" amin'ny alàlan'ny fanombohana malefaka!
Vidio izao ny DeFi CoinVidio izao ny DeFi Coin Vidio ny mari-pamantarana malaza indrindra ankehitriny!
DeFiCoins.io dia ezaka iray hanome anao fahalalana informatika izay azonao ampiharina sy hahazoana vola amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny tetikasa mety.
DeFi Coins dia natokana hitazomana ny mpamaky azy hatrany miaraka amin'ireo fironana farany eo amin'ny tsenan'i DeFi. Ireo mpanao gazety sy mpikaroka ao aminay dia manao fikarohana lalina ary manome anao serivisy tsara indrindra araka izay tratra.
Rehefa mahazo hype lehibe ny sehatra DeFi, ny mari-pamantarana rehetra miasa amin'ny ekosistema DeFi dia tokony hiakatra avo. Eto no nidirantsika, avelantsika ny mpamakinay hanararaotra tsara an'io fotoana io ary hahazo tombony lehibe.
Bitcoin BTC iombonana amin'ny Krim-bola Crypto Famatsiam-bola Debt Teknolojia itsinjaram-pahefana DeFi DEX Ethereum Fitantanam-bola IRS Pizza Strelka Vaults Uni Uniswap Taona. Vola Taona. Vidim-bola YFI YFI Fahalavoana